आइएसको दक्षिण एशियामा बढदो प्रभाव नेपालका लागि खतरामा « News24 : Premium News Channel
आइएसको दक्षिण एशियामा बढदो प्रभाव नेपालका लागि खतरामा
टर्कीको इस्तानबुल विमानस्थलमा आतंककारी सँगठन आईएसआईले गराएको विस्फोटमा बालबाल जोगिएका थिए, त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल टिआईए सुरक्षा गार्ड प्रमुख डिआईजी गोविन्द निरौला । विस्फोट हुनु पाँच मिनेट अघि मात्र डिआईजी निरौला सवार जहाज इस्तानबुलबाट उडेको थियो । पाकिस्तान, माल्दिभ्स र भारतका युवा भर्ती भएर आईएसका लडाकु बनेका तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । केही दिनअघि दक्षिण एशियाली मुलुक ढाकामा २० जनाको ज्यान जाने गरि गराएको बम विस्फोटले आतंककारीहरु नजिकै आईपुगेको संकेत गर्छ । के नेपाल र यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षित छ त ?
युरोप, अमेरिकालगायत क्षेत्रलाई अत्याएका आतंकवादी संगठनहरू आईएस र अलकायदाले बंगलादेशबाट भारत हुँदै चीनलाई आफ्नो निशाना बनाउँदै छन् । सिरिया र इराकबाट सुरु भएको आईएसको प्रभाव दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, श्रीलंका, बंगलादेश र भारतमा आईसकेको छ । मकैको घानमा घुस मिसिए झैँ कतै नेपाल पिसिने त होइन ? यो संवेदनशिल प्रश्न बनेको छ । आतंकवादी आक्रमणको सूचना नभए पनि जोखिम बढ्दै गएको प्रहरीको विश्लेषण छ । सम्भावित चुनौती सामना र नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायले उच्च सुरक्षा सर्तकता अपनाएका छन् ।
विमानस्थल प्रहरीसँगै आतंकवाद हेर्ने नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोसँगै सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जनशक्ति खटिएका छन् । विशेष कार्यदलमा टोली परिचालन हुन थालेको छ । बंगलादेशमा आईएसको सशक्त उपस्थिति हुनु, भारतमा सक्रिय सदस्य देखिनु र आईएस चिनियाँ मुस्लिम युवातिर केन्द्रित हुँदा नेपालमा पनि जोखिम बढेको विश्लेषण हुन थालेको छ । अहिलेसम्म कहिँ कतैबाट आतकंकारीहरुको साँठगाँठ वा नेपालसम्बन्धी कुनै योजना खुलेको छैन तर ट्रान्जिटको रुपमा विमानस्थल र सेल्टरको रुपमा नेपाल प्रयोग हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले गत जुन २ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिआतंकवादसम्बन्धी रिपोर्टमा ‘नेपाल–भारतको खुला सीमा र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कमजोर सुरक्षा प्रणालीका कारण नेपाललाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय आतंकवादी समूहले ट्रान्जिट प्वाइन्टको रूपमा प्रयोग गर्ने खतरा रहेको उल्लेख गरेको त्यसै पक्कै होइन